Home Wararka Dibada Sheekh Zakir iyo Sheekh Gumi: Maxay diintu ka qabtaa dilka qofka Nabiga...
Sheekh Axmed Gumi oo saldhiggiisu yahay gobolka Kaduna ee dalka Nideria ayaa hadal hayn badan dhaliyay kaddib markii uu ka digay in “qof bani’aadan ah loo dilo sabab la xiriirta aflagaaddo uu u gaystay Nabi Muxammad NNKH”.
Hadalka Sheekhan ayaa ka hor imaanaya fikirka la xiriira in la dilo cid walba oo ku xad gudubta sharafta Rasuulka CSW.
Waxa uu sheekg Axmed ku adkaystay mowqifkiisa, isagoo qodobkan u cuskaday “in Nabi Muxammad la aflagaaddeeyay isagoo nool, lana beeniyay balse uusan waligiis cidna u dilin arrintaas aargoosigeeda”.
Wadaadkan oo ka mid ah culimada ugu caansan dalka Nigeria ayaa hadalkan uga fal celinayay dil dhawaan gobolka Sokoto ee waddankaas loogu gaystay haweeney lagu magacaabo Deborah Samuel.
Isagoo si adag u hadlaya ayuu sheegay in “qof walba oo ruux masiixi ah Nigeria ugu dila sabab la xiriirta inuu aflagaaddeeyay Nabiga uusan urin doonin carafta Jannada”.
“Nideria ma aha waddan ay ka jirto dowlad Islaami ah, Muslimiinta waddanka ku nool waxa ay heshiis kula jiraan dadka haysta diimaha kale, si ay wadajir ugu noolaadaan qaab nabad ah, qof walba oo gaysta dil ku salaysan diinna waxa uu galay dambi aad u wayn,” ayuu yiri.
Gumi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay Masjidka Sultan Bello ee gobolka Kaduna.
Dilal la xiriira fal celinta ku aaddan ku xad gudubka diinta Islaamka ayaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay meelo ka mid ah caalamka.
Mid ka mid ah kuwii ugu xasaradaha badnaa waxa uu ka dhacay dalka Faransiiska, kaddib markii macallin ardaydiisa hortooda ku aflagaaddeeyay Nabiga loo gaystay dil.
Maxaa la samaynayaa haddii diinta Islaamka meel looga dhaco?
Culimada Muslimiinta kuwooda ugu caansan ee mowduucan marar kala duwan ka hadlay waxaa ka mid ah Sheekh Zakir Naik oo ah daaci faafiya Diinta Islaamka.
Waxa uu sheegay in arrinta noocaas ah looga fal celin karo qaabab ay ka mid yihiin in lagu beeniyo dhinaca warbaahinta, baraha bulshada iyo in mudaharaadyo nabadeed looga soo hor jeesto ,balse aysan diintu qabin in la dilo qof falkaas sameeyay.
Habka uu qofka Muslimka ah uga fal celin karo waxyaabaha meel ka dhaca ku ah Diinta Islaamka, gaar ahaan Nabiga NNKH, waxaan u kala qaadi karaa lix qaab. Habka koowaad waa in looga jawaabo dhinaca warbaahinta, meel walba oo uu ka dhaco xad gudubka, sababtoo ah haddii ay iyagu sheeganayaan inay hadalkooda xor u yihiin annaguna xor baan u nahay inaan ka jawaabno.
“Qaabka labaad waxa uu noqon karaa mudaharaad nabadaysan, tirada ka qayb galaysa intay doonto ha la ekaato laakiin inuu noqdo dibadbax nabadaysan. Qaabka saddexaad oo qof walba oo Muslim ah uu samayn karo waa in lala tiigsado dhinaca sharciga, oo tallaabo sharci ah la qaado, kiiskana maxkamad loo gudbiyo.
“Qaabka afaraad waa in la sameeyo cadaadis dhaqaale, tusaale ahaan in la mamnuuco badeecooyinka ka imaada waddanka uu xad gudubka diinta ka dhacay. Qaabka shanaad waa in la qaado tallaabo dhinaca siyaasadda ah, sida in waddan Muslim ah uu mowqif ka istaago arrintaas.
“Qaabka lixaad ee ugu dambeeya waa in la sameeyo ficil awood ku salaysan, sida in dadku ay ku gadoodaan safaaradda waddanka u gafay Islaamka. Tusaale ahaan in la gubo waddankaas calankiisa,” ayuu yiri Sheekh Zakir Naik.
Previous articleDagaalka Ukraine: Maxaa kala qabsaday haweeney Carmal ah iyo askari Ruush ah oo ninkeeda ka dilay?
Next articleGo’aanka Joe Biden: Waa imisa tirada Ciidamada Mareykanka ee uu Biden usoo dirayo Soomaaliya?
Naadiga Inter oo Guul aan guuldaro waxba dhaamin heshay kuna fashilantay...